အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်နိုင်ခြေ၏ပုံစံများကြိယာ၏ဥပမာများနှင့်အသုံးပြုမှုဖြစ်ကြသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ပုံစံများကြိယာပီရှိကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အပေါ် အခြေခံ. စပီကာတစ်ခုထင်မြင်ချက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အသုံးပြုကြသည်။ ဥပမာ: သူက 10 နာရီလောက်မှာရဲ့အလုပ်မှာဖြစ်ရပါမည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စပီကာလူတစ်ဦးဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လူတစ်ဦးများသောအားဖြင့်တစ်နေ့တာအတွင်းမှာအလုပ်လုပ်တယ်သောစပီကာရဲ့အသိပညာအပေါ်အခြေခံပြီးအလုပ်မှာကြောင်းကို 100% သေချာသည်။
'' ရ '' ပေါင်းသုံးပါ ကြိယာ သင်တစ်ခုခုကိစ္စတွင်ကြောင်းကို 100% (သို့မဟုတ် 100 နီးပါး%) သေချာသည့်အခါ။
ပစ္စုပ္ပန် = မဖြစ်မနေ + ကြိယာ (ပြုပါ)
အတိတ် = + ရှိရမည် အတိတ် participle (ပြုမိ)
ငှါ / မေလ
သုံးပါ '' ငှါ 'သို့မဟုတ်သင်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ခြင်း၏ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်ထင်ထားတဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ပြမှ' 'စခွေငျးငှါ' '။
ပစ္စုပ္ပန် = ငှါ / may + ကြိယာ (ပြုပါ)
ဒါဝိဒ်သည်ပွဲစဉ်မှဂျက်စီကာဖိတ်ခေါ်ပေမည်။ ကျွန်မသူကိုတကယ်သူမ၏ likes ငါသိ၏။
အတိတ် = / + အတိတ် participle (ပြုမိ) ရှိစေခြင်းငှါစေခြင်းငှါ,
ရန် '' နိုင် '' ကိုသုံးပါ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖော်ပြ အများအပြား၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ ဤပုံစံ '' တန်ခိုးကြီး 'သို့မဟုတ်' 'may' 'ကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာကိုယ့်တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေတစ်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန် = နိုင် + ကြိယာ (ပြုပါ)
ဂျိန်းအလုပ်မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သူမအိမ်မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မသေချာဘူး။
အတိတ် = + အတိတ် participle (ပြုမိ) ရှိနိုင်
အဲလစ်ပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ယနေ့အိမ်မှာတည်းခိုခဲ့ကြနိုင်ကြောင်း, သို့မဟုတ်သူမလုပ်ကိုင်ဖို့သွားကြပြီဖြစ်နိုင်တယ်။
သငျသညျစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါ 100% သေချာကြောင်းတစ်ခုထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ပြမှ '' မပေးနိုင် '' ကိုသုံးပါ။ ကျနော်တို့ '' ဖြစ်ရမည် 'သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ဦးအပြုသဘောသဘောအရသေချာနေလျှင်' 'ပါပြီရမယ်' 'ဒါပေမယ့်' 'မဖွစျနိုငျ' သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ဦးကအနုတ်အတွက်သေချာလျှင် '/ ပါပြီနိုင်ဘူးခဲ့ကြလို့မရပါဘူး' 'ကိုအသုံးပြုဖို့ အသိ။ အတိတ် form မှာ '' ပွုပါပွီလို့မရပါဘူး '' ဖြစ်နေဆဲသတိပြုပါ ဗြိတိသျှအင်္ဂလိပ် , ဒါပေမယ့်ပြောင်းလဲမှုများအမေရိကန်အင်္ဂလိပ်လို '' ပွုပါပွီနိုင်ဘူး '' ။
ပစ္စုပ္ပန် = (ပြုပါ) ကြိယာ + မရပါ
သငျသညျအလေးအနက်မဖွစျနိုငျ! ငါသည်သင်တို့ကို $ 1 သန်းဒေါ်လာချေးငှားမှုသွားဘူး!
အတိတ် = / + အတိတ် participle (ပြုမိ) ရှိသည်မဟုတ်နိုင်မလုပ်နိုင်ပါ
အသုံးပြုမှုရပါမည်, အကြောင်း, may, တတျနိုငျသသို့မဟုတ်မနိုင်ပေါင်းကြိယာ၏မှန်ကန်သောပုံစံ။ အချို့ကိစ္စများတွင်တစ်ဦးထက်ပိုမှန်ကန်သောအဖြေလည်းမရှိ။ နိုင်ရန်အတွက်အနီးကပ်အချိန်စကားကိုအာရုံစိုက်မှုမှပေးဆောင် အတွက် Model ကြိယာ conjugate မှန်ကန်စွာဖြစ်နိုင်ခြေ၏။
ဒါဝိဒ်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း သူကကျောင်းမှာ (be) __________ ။ အတန်း 8 မှာစတင်သူနှောင်းပိုင်းကဘယ်တော့မှပါပဲ။
သူမသည်ကကောင်းတစ်စိတ်ကူးကြောင်း (ထင်) __________ ။ ဒါဟာအရူးပဲ!
ငါလုံးဝသေချာပါတယ်! သူတို့က __________ (ရောက်ရှိမည်) မနေ့က။ တွမ်ငါ့ကိုသည်သူ၏ရထားလက်မှတ်ပြသခဲ့သည်။
သင်တန်းများ __________ စက်တင်ဘာလ၏ပဉ္စမ (စတင်), ဒါပေမယ့်ငါတကယ်သေချာမပေါ့။
မင်းနောက်နေတာလား! ဒါဝိဒ်သည် __________ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပဲရစ် (go) ။ သူကဥရောပကိုသွားဖို့လုံလောက်တဲ့ပိုက်ဆံမရှိပါ။
San Francisco မှာ (be) သူတို့ __________ New York မှာ (နထေိုငျ), သို့မဟုတ်သူ __________ ။ ငါသူကြီးတွေမြို့ကြီးများ likes ငါသိ၏။
အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲ __________ (be) အံ့သြဖွယ်နောက်ဆုံးညဥ့်။ ယောဟန်စိတ်ကူးအဆိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ __________ ပျော်စရာ (ရှိသည်) ။
ကျောင်းသားများ __________ (get) ဖျားနာခြင်းနှင့်သဒ္ဒါ၏ပင်ပန်း။ ငါကငြီးငွေ့စရာမျိုးကိုဖွင့်ကိုငါသိ၏။
အဲလစ် __________ (be) သူမကပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်ကောလိပ်ပြီးဆုံးကြောင့်အလုပ်ရှာနေ။
Janice __________ (ချင်) သင်နှင့်အတူထိတွေ့ရ။ ကျနော်တို့စကားပြောသည့်အခါသူမသည်အမြဲသင့်အကြောင်းမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူဖြစ်ရမည် - ဒါဝိဒ်သည်နှောင်းပိုင်းကဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။
စဉ်းစားလို့မရဘူး - ငါကအရူးစိတ်ကူးင်ထင်, ဒါကြောင့်ငါသေချာပါတယ်။
ရောက်ရှိလာကြပါပြီရမယ် - ငါလက်မှတ်မွငျသောကွောငျ့သူတို့မနေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့လုံးဝသေချာပါတယ်။
ဒါဟာဖြစ်နိုင်ရဲ့, ဒါပေမယ့်ငါတကယ်မသိရပါဘူး - ကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။
ပြီမနိုင် / သွားကြပြီနိုင်ဘူး - ကကျနော့်အမြင်အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါဒါဝိဒ်ပိုက်ဆံမရှိပါ။
အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင် / အသက်ရှင်စေခြင်းငှါ / / ဖြစ်မယ်နိုင် - ငါကသူကြီးတွေမြို့ကြီးများ likes ကိုသိပေမယ့်ငါသေချာဘို့မသိရပါဘူး။
/ ဖူးရမယ်ခဲ့ကြရပါမည် - ယောဟန်တစ်စိတ်ကူးအဆိုတော်င်, ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုငါနေတဲ့အကြီးအအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်သေချာပါတယ်။
ရရှိရမည် - ငါဆရာပေါ့။ ငါသိတယ်!
/ ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ရမည်ဖြစ်သည် - ဒါဟာသူမအလုပ်ရှာနေရဲ့ယုတ္တိပါပဲ။
ချင်ရမယ် - ငါသူမမကြာခဏသင့်အကြောင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။
'' Poder '' ရဲ့ Power
စပိန်ကြိယာ conjugation ဖို့နိဒါန်း
ပြင်သစ် Object ကို Pronoun
'' သောကြောင့် '' စပိန်ဟု
ပြင်သစ်ကြိယာ "Agréer" Conjugate လုပ်နည်း (သဘောတူမှ)
တူညီသည့်အအင်္ဂလိပ်ဘာသာအမှား: စေရန်လည်း vs. နှစ်ဦး vs.
ဝိုးတဝါးဖော်ပြချက်အသုံးပြုခြင်း - ခံ Imprecise
"ခါးပန်းကို" Conjugate လုပ်နည်း (ကိုဆွဲဆောင်ရန်)
Quote အတုအယောင်ခရူးရှော့ဖ် '' ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ၏အသေးစားထိုး '' တဖန် Round ကို
ကျောင်းသားများများအတွက်လမ်းညွှန် - Credit Card ကိုကြွေးမြီတည်ဆောက်ခြင်း
ဟွန်ဒါအားကစား Utility ကိုယာဉ်
Numerology မွေးဖွားခြင်း Path ကို
Unified Field Theory ကဘာလဲ?
Peloponnesian စစ်ပွဲအတွင်းစစျပှဲနှင့်စာချုပ်များ၏ Timeline ကို
စကားထူးများနှင့်ဖော်ပြချက် - Come
ရဲတိုက်ဥယျာဉ် - အမေရိက၏ပထမဦးဆုံးတရားဝင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရေးစင်တာ
ဝိညာဉ်တော်ဟယ်လိုသိပ္ပံကို Magic Tricks Dancing
အကောင်းဆုံးယောဟနျသ Hughes, Movies
Black ကမြွေသို့မဟုတ် Glow Worms Make ရန်ကဘယ်လို
Shawna နှင့် Keifer Thompson ကအတူတကွဂရိတ် (နိုင်ငံ) ဂီတ Make
တစ်ဦးသည်မင်္ဂလာ, ကျန်းမာရေးအိမ်ထောင်ရေးဖူးမှ 12 နည်းလမ်းများ
ပါ GRE သရုပ်ခွဲအရေးအသားအက်ဆေးရေးထားလုပ်နည်း
အကြွင်းမဲ့အာဏာ Beginner အင်္ဂလိပ် - ဤနှင့်ဆိုလိုသည်မှာ - စာသင်ခန်း္တု
အဆိုပါမရိန်းနှင့်က Black-Eyed ကလေးများ
ဘုံလျှောက်လွှာစာစီစာကုံး Option ကို3သိကောင်းစရာများ: တစ်ယုံကွညျစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကြုံတွေ့
အဆင့်မြင့်စာပေပြုစုရေးနှင့်စကားပြောသင်ခန်းစာ: Lego မှအဆောက်အအုံလုပ်ကွက်